ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ |တရုတ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Gauze Swab
Gauze Pads ပိတ်ကျဲစ Swabs medc...
FFP2 Mask5လွှာ
Gauze Cotton ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်...
တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာဖုံး
သာလွန်သောကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုပေးသည်။အသက်ရှုခံနိုင်ရည်နည်းခြင်း။ထူးခြားသော မျက်နှာပြင်ရေစိုခံမှုနှင့် နူးညံ့သောအလွှာ။ယားယံခြင်းမရှိ၊ မှန်ဖိုက်ဘာကင်းပြီး စေးထစ်ကင်းသည်။အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် ချိန်ညှိနိုင်သော နှာခေါင်းအပိုင်း။ EO ဖြင့် ပိုးသတ်နိုင်ပြီး တစ်ကြိမ်တည်းအတွက်သာ၊ ပျော့ပျောင်းသော နားကွင်း။ ဘက်တီးရီးယား၊ ဖုန်မှုန့်၊ ဝတ်မှုန်၊ လေထုမှ ဓာတုဗေဒ အမှုန်အမွှားများ၊ မီးခိုးနှင့် အမှုန်အမွှားများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။စီးပွားရေးအရ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဖက်ရှင်နှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်း။ ၎င်းအား ထိုးဖောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ ဝတ်ဆင်ထားကာ၊ သုံးစွဲသူ၏ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းနှင့် မေးရိုးများကို နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးကာ ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော အဏုဇီဝသက်ရှိများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့် အမှုန်အမွှားများကို တိုက်ရိုက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အမြင်အာရုံနှင့် ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံတို့၌ ကောင်းမွန်စွာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အရောင်ချွတ်ဆေးများကို လုံးဝမထည့်ပါနှင့်။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဘက်တီးရီးယားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အများစုကို အသုံးပြုသည်။
Gauze Pads gauze swabs medcial steriole 8 ply 16ply gauze ထုတ်ကုန် တစ်ခါသုံး
1.Pure 100% ဝါဂွမ်းချည်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး တွယ်ကပ်မှုရှိကြောင်း သေချာစေသည်။
3. Germany Machines မှ Bleached နည်းပညာဆိုင်ရာ methood
4. 2002 ခုနှစ်ကတည်းက အတွေ့အကြုံများ
5. စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း 500 ကျော်
6.China Export ထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ကျဲစစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 10
Gauze ချည် pads မြုံ
သန့်စင်သော 100% ချည်သားချည်သားသည် ထုတ်ကုန်ကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး တွယ်တာမှုကို သေချာစေသည်။ သာလွန်ကောင်းမွန်မှုမှာ Pads များသည် မည်သည့်အဆီများကိုမဆို သွေးစုပ်ယူနိုင်စေရန် ပြီးပြည့်စုံစေပါသည်။ Customer များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ Pads အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ခေါက်ခြင်းနှင့် ဖြည်ခြင်းကဲ့သို့သော ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း နှင့် မဟုတ်သော၊ x-ray .ထို adherent aods များသည် လည်ပတ်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ဖောက်သည်များ၏နမူနာ၊ ပုံဆွဲ၊ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်၊ နှင့်မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်အရမဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Gauze Cotton ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ပိတ်ကျဲစ အဖြူဆေး ပိတ်ပါးလိပ်
အရွယ်အစား 2' 3' 4' 6'
လျှောက်လွှာဧရိယာ- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ- ခွဲစိတ်မှု၊ ပုံသေပံ့ပိုးမှု၊ ခြေလက်ပြင်ဆင်မှု စသည်တို့
သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန် :3နှစ်
OEM OEDER ကို လက်ခံပါသည်။
စျေးနှုန်း- အခြားပေးသွင်းသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တူညီသော စာရွက်စာတမ်းများတွင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။
အစိတ်အပိုင်း Mask ကိုယ်ထည်၊ ပျော့ပျောင်းသော နားကွင်းများ၊ ချိန်ညှိနိုင်သော နှာခေါင်းညှပ်5လွှာ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပြည့်စုံသော အကာအကွယ်ကို ရရှိစေပါသည်။ Flitration efficiency 95%(FFP2 Level)။ အသားတင်အလေးချိန်L5-6g/အပိုင်း။
ပထမထပ် : 50g/m2 Spunbond Polypropylene(pp) Nonwoven
ဒုတိယအလွှာ : 25g/m2 Meltblown nonwoven (fliter)
တတိယအလွှာ : 25g/m2 Meltbown nonwoven (filter)
4 ခုမြောက် အလွှာ : 40g.m2 hot-air cotton(ES) သည် နူးညံ့ပြီး အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူရန်
5 ခုမြောက် အလွှာ : 25g/m2 Spunbond Polypropylene(pp) Nonwoven
တစ်ခါသုံး Medical Sterile3လွှာ မျက်နှာဖုံးများ
နားဖုံးအမျိုးအစား ဖော်ပြချက်ပါရှိသော အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး
PP nonwoven နှင့် filter အထည်များဖြင့်3အလွှာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းကို ခွဲစိတ်စဉ်အတွင်းနှင့် သူနာပြုများအတွင်း ဝတ်ဆင်သူ၏ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းတို့မှ အရည်စက်များနှင့် အမြှေးပါးများတွင် ဖမ်းမိသောဘက်တီးရီးယားပိုးများကို ၀တ်ဆင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
နားဖုံးအမျိုးအစား အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး
BFE (ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်မှု ထိရောက်မှု) ≥ 95%
တခါသုံး ဆေးဘက်ဝင်ကော်ပရက်စ် Cotton Gauze Spuare Pad 100% စုပ်ယူနိုင်သော၊
SHAOHU@Gauze Swaba သည် 100% အရောင်ဖျော့ထားသော ချည်သားပိတ်စကိုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏နူးညံ့မှုနှင့် စုပ်ယူမှုနှင့်အတူ၊ ၎င်းတို့သည် သေးငယ်သောဒဏ်ရာများကို ဖုံးအုပ်ရန်၊ လျှို့ဝှက်ချက်များကို စုပ်ယူရန်နှင့် ဒုတိယအနာကျက်စေရန် ကုသရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
1.100% ချည်သား၊ စုပ်ယူမှုမြင့်မားပြီး နူးညံ့မှု
2.Cotton yarn: 21's 32's,40's
3.Mesh: 10,14,17,20,25,29 threads
6. ပုံမှန်အရွယ်အစား : 5cm*5cm(2''x2''), 7.5cm*7.5cm(3''x3'),10cmx10cm(4''x4'') သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
7. Ply: 4ply, 8ply, 12ply, 16ply
8.Type: ခေါက်အနားများ သို့မဟုတ် မပါဘဲ
9.X-ray- bule x-ray ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ သိရှိနိုင်သည်။
10.Steriel Package- tareile paper+paper pouch ၊paper+flim pouch အပြင် မီးလောင်ရာပါ
11.Packing Qty: 1pc၊ 2pcs၊ 3pcs၊ 5pcs၊ 10pcs မြုံသောအိတ်တစ်ခု
12. နမူနာများ- အခမဲ့
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆေးဆိုင်စသည်ဖြင့် အမြောက်အမြားဝယ်ယူလေ့ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများအားလုံးသည် CE ၊ ISO 13485 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါရှိသည်။
ချည်ခေါင်းကြိတ်စက်သည် တစ်ခုတည်းသော ပုံသွင်းစက်အားလုံးကို အသုံးပြုပါသည်။ ဝါဂွမ်းခေါင်းသည် ပြန့်ကျဲရန်မလွယ်ကူပါ၊ ဖလို့စ်များ ပြုတ်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ ထိပ်ဖျားတွင် ရေစုပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပြီး ပိုးမွှားကင်းသည့်ပုံစံဖြင့် အချိန်မီအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် အိမ်သုံးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက် သင့်လျော်သည်၊ အရေပြားနှင့်အနာများကို သန့်ရှင်းစေပြီး ပိုးသတ်သောအခါတွင် ဆေးလိမ်းရန်အသုံးပြုသည်။ ချည်ဖျင်များသည် အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့် အထုပ်အရွယ်အစားများပါရှိပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တစ်ခါသုံး Sterile Fliter Mask Self-suction filter mask
SHAOHU@ Self-suction filter mask တခါသုံး sterile fliter mask
2.အရောင် : အဖြူရောင်
4. ဝတ်မှုန်၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို စစ်ထုတ်ပါ။
5. လူ့အရေပြားကို လှုံ့ဆော်မှု မရှိပါ။
6. ပေါ့ပါးပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသော
.3-Layer Filtration၊ လေကောင်းလေသန့် BEF95%
.28g+28g+28g သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်သော တစ်ခုခု
1st ply : 28g/m2 ပတ်ချာလည်-ဘွန်း PP
ဒုတိယအလွှာ- 28g/m2 အရည်ပျော်-မှုတ်ထုတ် PP(ဖလီတာ)
တတိယအလွှာ- 28g/m2 ပတ်ချာလည်-ဘွန်း PP
.သင့်မျက်နှာကို ချိန်ညှိနိုင်သော နှာခေါင်းကလစ်ဖြင့် အံကိုက်ပါ။
.အလုံပိတ်တီးဝိုင်း elastic sponge အပြောင်းအလဲနဲ့ဖွဲ့စည်း
.နားရွက်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် မြင့်မားတဲ့ elastic flat ear-loop လုပ်ပါ။
.စိုစွတ်သော ဒီဇိုင်းသည် ပိုလုံခြုံပြီး ပိုမိုထိရောက်သည်။
အကာအကွယ်သုံးလွှာ .နှာခေါင်းတံတား၏ ပလပ်စတစ်အမြှောင်း .မြင့်မားသော elastic ပြားချပ်ချပ်နားသိုင်းကြိုးများ။အရေပြားနှင့်လိုက်ဖက်သော n ယက်လုပ်ထားသည့်အထည် .ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဆန်သောဂဟေဆက်ခြင်း .အသုံးပြုမှုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၊ဆေးရုံ ၊နေ့စဉ်အကာအကွယ် .PLANAR EARLOOP/17.5*9.5CM .PP+Melibown Non - ယက်။25.28Gsm သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
1.Material: Non-Woven အထည်
2.20+20+20gsm သို့မဟုတ် 25+25+25gsm
3.With ear-loop ၊3 ply
4.Adjustable 10.5cm နှာခေါင်းအပိုင်းအစ ပလပ်စတစ်နှာခေါင်းဝါယာကြိုး /alimini9um နှာခေါင်းဝါယာ
5. ဝတ်မှုန်၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို စစ်ထုတ်ပါ။
6. High filtration ထိရောက်မှု 95% 98% ထက် ကျော်လွန်သည်
တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ, မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းများ, တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask, မျက်နှာကဲ့သို့ Mask,
အမှတ် ၃၃-၈၊ Shanyang Avenue၊ Economic Development Zone၊ Huaian District၊ Huai'an City